Suunka Xirmada & Warshadda Suunka - Shiinaha Suunka Xirmada & Soo -saarayaasha Suunka iyo Alaab -qeybiyeyaasha
Xadhkaha shandadaha ayaa aad muhiim u ah si boorsooyinka loo dhigo. Si kasta oo loo adeegsado baabuurta gaarka loo leeyahay, tareenada ama diyaaradaha, shandadda si fudud ayaa loo cadaadin doonaa, shandadaha shandadda ku jira waxay noqon doonaan kuwo tiro badan. Taasi runtii waa dhib. Iyada oo la kaashanayo suumanka boorsooyinka, waxay ku darsataa xoogga dibadda shandadda si loo hagaajiyo boorsooyinka. Sida loo kala saaro shandaddaada goobaha dadweynaha, kuwa kale ayaa laga yaabaa inay isticmaalaan shandado summad leh iyo midabbo isku mid ah, waxaad ku kala garan kartaa boorsadaada caawinta suumanka boorsooyinka. Taasi waa hal hawl. Intaa waxaa dheer, waxay ku dari kartaa astaanta xargaha boorsooyinka. Dabadeedna suumanka boorsooyinka ayaa loo isticmaali karaa hadiyadaha la siiyo dadka socotada ah. Shirkadaha duullimaadyadu waxay doorbidaan hadiyado noocan oo kale ah. Suunka waxaa la soo saaraa ballaciisu yahay 2 inji, isagoo leh suunka badbaadada si boorsooyinka si ammaan ah loo xiro. Agabyo kala duwan ayaa la dooran karaa sida polyester, nylon & nylon agabka. Agabyadan dhexdooda, maaddada nayloon ayaa leh tayada ugu fiican oo sii waarta. Nylon ku -dayashada ayaa ku xigta ka dibna waa maaddada polyester -ka. Waxay samayn kartaa ikhtiyaar macquul ah iyada oo la tixgelinayo isticmaalkeeda iyo kharashkeeda. Habka kala duwan ayaa loo adeegsan karaa astaanta sida daabacaadda silkscreen, daabacaadda CMYK, daabacaadda daabacan, tolida iyo iwm.